जादू देखाउने बौद्ध भिक्षु – Discovery4p.com
Basanta Maharjan Society Leaveacomment 616 Views
‘‘म जादूगर होइन, भिक्षु हुँ । मान्छेलाई जागरुक बनाएर समाजलाई डो-याउन चाहन्छु ।’’
भारतमा एक बौद्ध भिक्षु आजभोलि जादू देखाउँदै हिड्छन् । उनको पहिचान बौद्ध भिक्षु त हो नै, तर जादू देखाउने भिक्षुका रुपमा ।
गौतम बुद्धले जादू वा इन्द्रजाललाई कुनै स्थान दिएका भने छैनन् । जादू देखाउने एक दम्पतीलाई प्रव्रज्या दिई भिक्षु र भिक्षुणी बनाएको घटना भने पाइन्छ । तर त्यसपछि तिनीहरुलाई जादू देखाउन दिएनन् ।
जादूले जस्तै मान्छेलाई विस्मीत पार्ने ऋद्धिबल प्रदर्शनी बौद्ध जगतमा पाइन्छ । बुद्ध पनि ऋद्धिबल प्रदर्शनी गर्दथे । उनका अग्रश्रावक मौद्गल्यायण त ऋद्धिबलमा माहिर नै थिए । हावामा हिड्नु, उड्नु, तुरुन्तै अन्र्तध्यान हुनु तथा प्रकट हुनुजस्ता अनेकौं ऋद्धिबल ध्यानीहरुलाई स्वतः प्राप्त हुने गर्दछ । तर जहाँ पायो त्यहाँ ऋद्धि प्रदर्शनी गर्दै हिड्नमा बुद्धले रोक लगाएका थिए । बुद्धले विभिन्न खेलमाथि कडा रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए, त्यही प्रकृतिको जादूमाथि मात्र सकारात्मक हुने त कुरा हुँदैन । तर जादू देखाउँदै हिड्ने भन्ते बुद्धप्रकाश भन्छन्– ‘‘जादूलाई प्रयोग गरेर म ‘अन्धविश्वास भगाओ– देश बचाओं अभियानमा लागिरहेको छु ।’’
बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरुलाई लोक कल्याणका लागि देशदेशावरको यात्रा गर्न उत्प्रेरित गर्थे । एकै ठाउँमा बसिराख्न दिंदैनथे । स्वयं बुद्ध पनि भ्रमण गर्दै गर्थे र धर्म उपदेश दिँदै हिड्थे । उही परम्परालाई भन्ते बुद्धप्रकाश थाम्दै आएका छन् । उनले जादू देखाउँदै भारतका १५ प्रदेश घुमिसकेका छन् । स्कूल, कलेज, जेल मात्रै होइन, घुम्दै जानेक्रममा उपयुक्त समय र स्थान पायो कि उनी जादू देखाउन तम्सी हाल्छन् । टेलिभिजनमा पनि जादूको प्रदर्शन गरिसकेका छन् । उनी भारतका विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दै गरेको अवस्थामा विहारस्थित नव नालन्दा विश्वविद्यालयको नजिकै एक विहारमा मेरो उनीसँग भेट भएको थियो ।
उनी जादू देखाएर मान्छेहरुलाई अचम्म मात्रै पार्दैनन्, जादू देखाउँदा लुकाइने ‘ट्रीक’ पनि खुलाइदिन्छन् । जादू, टुनामुना जस्ता केही पनि कुरा छँदै छैनन् र तिनीहरु त हातको सफाइ मात्रै रहको सन्देश दिएर सर्वसाधारणलाई अन्धविश्वास तथा अन्य भ्रमबाट हटाउनु नै उनको मुख्य उद्देश्य हो । जादूको मद्दतबाट अन्धविश्वासलाई संस्थागत गर्नेहरुको आधार नै ध्वस्त पार्न उनले यसरी जादूको भेद पनि खोल्ने गरेका हुन् । जादू देखाउँदै हिडने क्रममा उनी सामाजिक अन्धविश्वासमाथि प्रहार गर्नुका साथै बुद्ध वचनहरु पनि सुनाउँदै गर्छन् ।
भन्ते बुद्धप्रकाश भिक्षु हुनुअघि पेशाले चिकित्सक थिए । हिन्दू पृष्ठभूमिका उनी बौद्ध धर्ममा आकर्षित भई १५ वर्षअघि प्रव्रजित भएका थिए । बौद्ध धर्ममा प्रवजित हुनु भनेको भिक्षु बन्नु हो ।
जादूको प्रशिक्षण लिई अब जादू देखाउँदै हिडेका हुन् । जादू मात्रै देखाउने कि सिकाउने पनि गर्नु हुन्छ ? उनी जवाफ दिन्छन्, मेरो उद्देश्यमा सहायक हुने हो भने तिनीहरुलाई सिकाउनमा कुनै आपत्ती छैन । भन्छन्– ‘‘म जादूगर होइन, भिक्षु हुँ । मान्छेलाई जागरुक बनाएर समाजलाई डो-याउन चाहन्छु ।’’
About Basanta Maharjan
Basanta Maharjan, author and researcher, has expertised in Nepalese history, culture, archaeology and Buddhist study. Nine of books and number of articles on Buddhist Study have been authorized by him. He has mastered in Buddhist study and isagold medalist from Tribhuvan University. As well as, he has mastered in Nepalese history, culture and archaeology also from same university. Currently he has been involved in research work and lectures on own subject. mail : maharjan_basanta@yahoo.com
Previous सार्वजनिक अभिलेखालय आशा सफूकुथि
Next बुद्ध धर्ममा मदिरापानको अर्थ
जति धेरै श्रीमान उति नै शक्तिवान : हिमाली क्षेत्रमा बहुपति प्रथा
घरमा सबैले कमाएर ल्याउने धन एउटै ढुकुटीमा जान्छ र त्यो ढुकुटीको संचालक ती महिला नै …
नेवार समाजमा दाम्पत्य जीवनको लागि गरिने विवाहको आफ्नै महत्व हुँदाहुँदै पनि पारपाचुकेको सजिलो बाटो पनि …